ARAGTIDA ARAGTIDA IYO ANALYSIS | FXCC
Muhiimadda Falanqaynta suuqa Suuqa
Falanqaynta suuqyada suuqa ayaa ku yimid laba nooc oo kala duwan; farsamada iyo falanqaynta aasaasiga ah Wadahadaladu waa ay ka soo horjeedeen tan iyo markii la dhoofiyay ganacsiga sida falanqaynta falanqayntu ugu fiican tahay, ama ganacsatadu waa inay shaqaaleeyaan lammaanaha labada dhinacba, si ay u sameeyaan go'aano ganacsi oo fara badan. Dhaqdhaqaaqa farsamada iyo falanqaynta labadaba waxaa sidoo kale lagu muransan yahay waxa loogu yeeray "gogoldhigga suuqa", oo sheegaya in sicirka suuqa uu yahay mid aan la saadaalin Karin.
Inkastoo wadahadaladu socdaan muddo tobanaan sano ah sida falanqaynta falanqaynta ugu fiican, hal arrin oo dhan khabiirada ganacsiga iyo falanqeeyayaasha ayaa isku raaci doona in labada foomam leeyihiin sifooyin iyo faa'iidooyin kuwaas oo ka caawin kara ganacsatada. Falanqeeyayaasha ayaa sidoo kale ku heshiin doona in ay qaadan karto nolol dhaqameed iyo codsi si ay u noqdaan kuwo daacad ah, ama labadaba falanqaynta. Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya, Nicholas Musonye, ​​ayaa sheegay inaysan jirin wax khasaare ah oo soo kala gaaray dhinacyada dagaalamaya,
Falanqeeyayaasha aasaasiga ah ayaa ka dhaadhicinaya falanqaynta farsamada, taas oo soo jeedinaysa in badi calaamadaha farsamada ayan shaqayn karin ama aysan shaqayn karin, sababtoo ah tilmaamayaashu "is-qabadsiin iyo isdifaac". Waxa laga yaabaa inay shaki ka gali karaan jaantuska iyo qiimaha badanaaba loo isticmaalo sida: MACD, RSI, stochastics, DMI, PSAR (istaagidda iyo dib u celinta), Bollinger bandyada iwm. Hase yeeshee, waxaa jira ganacsato badan oo falanqeyn farsamo ah ku shaqeeya qorshahooda ganacsi , kuwaas oo si cad u sheegi doona isticmaalka tilmaamayaasha, inay soo galaan iyo ka bixitaankooda xirfadahooda, waxay dhab ahaantii shaqeeyaan. Ma ahan mar kasta, laakiin marka la eego ixtimaalka iyo waxqabadka celceliska, falanqaynta farsamadoodu waxay si fiican u shaqeeyaan waqti ku filan si loo hubiyo inay sameeyeen qorshe ganacsi oo la isku hallayn karo iyo istaraatejiyad, "darajo" sida ganacsatada inta badan tixraacaan.
Si kastaba ha ahaatee, waa mid macquul ah in ku dhawaad ​​dhammaan falanqeeyayaasha aasaasiga ah ayaa wali isticmaali doona qaababka falanqaynta farsamo, xitaa marka la eego bakhaar-xad-dhaaf ah oo muujinaya gawaarida bilaashka ah. Waxay u malaynayaan inay yihiin habka qiimaha qiimaha ay doorbidaan: Shamac, Heikin-Ashi, line, barbaro, iwm. Ama waxay isticmaali doonaan istaraatiijiyad asaasi ah oo ganacsi oo ay ka mid yihiin: miisaankoodu sarreeyo, sareeya, celceliska dhaqdhaqaaqa, madaxa iyo garbaha 'Noocyada, jajabyada, dhibcaha isbeddelka, Leexinta Fibonacci iyo khadadka sawirada iwm. Marka qaar ka mid ah shuruudahaas lagu dhigo shaxan, jaantusku wuxuu u ekaan karaa mashquul sida shaxda leh oo leh qaar ka mid ah tusayaasha kor ku xusan. Mana xisaabinaynin meesha ay tahay in la joojiyo oo ay qaataan amarro xaddidan oo xitaa noocyo falanqayn farsamo ah?
Sidaa daraadeed xitaa ganacsatada falanqaynta falanqaynta aasaasiga ah waa inay isticmaalaan falanqayn farsamo, waxay doorbidi doonaan inay xoogga saaraan warka, dhacdooyinka iyo xog-bixinta si ay u sameeyaan, ama in ay xajiyaan go'aanadooda. Waxayna sii joogi doonaan dhammaan wargeysyada, oo laga yaabo inay isticmaalaan Twitter, ama bixiyaan kharashka dheeraadka ah ee loo adeegsado waxa loo yaqaan "squawk", oo isku dayaya in ay ku yaalaan suuqa sare iyo go'aamadooda ganacsiga.
Si kastaba ha noqotee, qaybtan boggayaga ayaan halkan u joogin si aan ugala hadlo mudnaanta koowaad ee falanqaynta aasaasiga ah iyo farsamada, waxaanu sameyneynaa dugsi FX ah taas oo aan samayn doonno waqti dheer, waxaanu bixinaynaa guudmar kooban oo ku saabsan kala-duwanaanshaha muhiimka u dhexeeya labada goobood ee kala duwan ee falanqaynta.
Waa maxay falanqaynta farsamada Forex?
Falanqaynta farsamada (badanaa loo yaqaano TA) ayaa ah saadaalinta dhaqdhaqaaqa dhaqaale ee mustaqbalka ee ku saleysan baaritaanka dhaqdhaqaaqa qiimaha jaban. Falanqaynta Farsamada waxay ka caawin kartaa ganacsatada inay filayaan waxa dhici karta in qiimaha la helo waqti ka dib. Falanqaynta farsamadu waxay isticmaashaa noocyo kala duwan oo tusayaal ah iyo jaantusyo muujinaya dhaqdhaqaaqa qiimaha mudada loo qabtay. By falanqaynta tirakoobyada laga soo ururiyey dhaqdhaqaaqa ganacsiga, sida dhaqdhaqaaqa qiimaha iyo mugga, ganacsatada waxay rajeynayaan inay sameeyaan go'aan ku saabsan qiimaha jihada ee laga yaabo inuu qaato.
Falanqayn farsamo oo fara badan - ganacsatada ayaa wax yar u fiirsada wararka. Waxay qaadaan aragtida ah in ugu dambeyntii faahfaahsan iyo laga yaabo in riwaayad laga sii daayo warshadaynta dhaqaalaha, ugu dambeyntii waxay ku muujin doontaa shaxanka. Xaqiiqdii, qiimaha shaxda ayaa badanaa ka jawaabi karta ka hor inta ganacsatada ay xitaa arkeen xogta la sii daayay, ama waxay fursad u heleen in ay akhriyaan warka kadibna ay sameeyaan go'aan qeexan. Tani waxay noqon kartaa sida natiijada algorithmic / sare ee ganacsatada horay u awood u leh in ay horay u socodsiiyaan wararka xawaaraha iftiinka ka hor inta badan ganacsatada dhiman karaan karaan.
Waa maxay falanqaynta aasaasiga ah ee Forex?
Falanqeeyayaasha aasaasiga ahi waxay eegaan qiimaha qaddarinta ee maalgashiga, waayo waxay u baahan tahay baaritaan ku dhow shuruudaha dhaqaale ee lagu qiimeeyo lacagta qaranka. Waxaa jira arrimo badan oo aasaasi ah oo aasaasi ah oo door ka ciyaara dhaqdhaqaaqa dhaqaalaha, kuwaas oo badidoodu ku qoran yihiin "tilmaamayaasha dhaqaalaha".
Tilmaamayaasha dhaqaalaha waa warbixino iyo macluumaad ay soo saareen xukuumadda waddanka, ama shirkad gaar ah sida Markit, taas oo faahfaahinaysa waxqabad dhaqaale ee dalka. Warbixinnada dhaqaalaha ayaa ah habka lagu cabbiro caafimaadka guud ee wadanka guud ahaan. La sii daayay waqtiyada jadwalku xogta suuqyada la siinayo iyada oo tilmaamaysa xaalad dhaqaale qaran; miyuu hagaagay ama hoos u dhacay? Ganacsiga FX, wixii isbeddel ah ee dhexdhexaadiyaha ah, xogihii hore, ama wixii la saadaaliyay, waxay sababi karaan dhaqdhaqaaqyo waaweyn iyo mugga.
Halkan waxaa ah afar warar oo waaweyn oo ku saabsan (sii deyn) qiimaha sarrifka ah
GDP waa qiyaasta ugu ballaaran ee dhaqaalaha dalka; qiimaha guud ee suuqyada ee dhammaan badeecadaha iyo adeegyada lagu soo saaro waddan intii lagu jiray muddadii loogu talagalay. Dhaqaale ahaan ganacsatada, waxay ganacsatadu inta badan diiradda saaraan laba warbixinno oo la soo saaray ka hor inta aan la saadaalin karin wax-soo-saarka GDP; warbixinta horumarsan iyo warbixinta hordhaca ah. Wareegtooyinka u dhaxeeya warbixinnadaasi waxay keeni karaan isbeddel wayn.
Warshadaha iibka iibsashada 'waxay xaddidan rasiidhyada dukaamada tafaariiqda ee dal gaar ah. Warbixinta ayaa muujinaysa tilmaam waxtar leh ee guud ahaan kharashka macaamiisha kharashka macaamiisha, oo loo qaabeeyey isbeddellada xilliyeed. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu saadaaliyo waxqabadka astaamaha muhiimka ah ee lagama maarmaanka ah iyo si loo qiimeeyo jihada tooska ee dhaqaalaha.
Isbeddelka soo-saarka: warshadaha, miinooyinka iyo yutiilitiyada dhaqaalaha qaranka ayaa tilmaamaya caafimaadka guud ee dhaqaalaha. Waxa kale oo ay sheegaysaa awooddooda; heerka shay kasta ee awoodda ama adeegga warshad walba loo isticmaalo. Fikrad ahaan, dalal waxay u baahan tahay in ay la kulmaan koror soo-saarka, iyadoo ay ku dhowdahay heerka ugu sareeya.
Ganacsatada isticmaalaya xogtan ayaa badanaa kormeera wax soo saarka tamarta, taas oo noqon karta mid isdaba-joog ah sida baahida tamarta, ay saameynayso isbeddelka cimilada. Dib u habeyn muhiim ah oo udhaxeeya warbixinnada waxaa sababi kara isbeddelka cimilada, taas oo keeni karta isbeddelka lacagta qaranka.
CPI waxay qiyaastaa isbeddelka sicir bararka qiimaha alaabta macaamiisha ee ku dhow. laba boqol oo qaybood oo kala duwan. Warbixintan waxaa loo isticmaali karaa in lagu arko haddii wadan uu sameynayo ama uu lacag ka soo galo alaabta iyo adeegyadeeda. Waxa kale oo loo isticmaali karaa in lagu go'aamiyo in bangi dhexe ama dawladdu kor u qaado ama yareeyso heerka dulsaarka aasaasiga ah, ama qabow ama kicin dhaqaalaha.